Pleistocene: ihe ọ bụla ị chọrọ ịma gbasara nkewa ala a | Netwọk Mgbasa Ozi
El oge quaternary ha nwere otutu nkewa nke ala. Taa, anyị ga-elekwasị anya na nkewa mbụ nke oge a. Ọ gbasara Pleistocene. Ihe e jiri mara mpaghara mbara ala a bụ ọkachasị site na ịnwe ọnọdụ oyi na-atụ na mbara ụwa niile na ọdịdị nke nnukwu anụmanụ dị ka mammoth. Iji ghota ihe nile nke ihe omumu nke ihe omimi nke ala a, odi nkpa ima ihe geological oge.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Pleistocene.
2 Geology nke Pleistocene
3 Igwe ihu igwe Pleistocene
4 Ifuru, fauna na mmadu
Oge a bụ ntụnye aka ebe ọ bụ na a na-amụ mmalite nke ụdị mmadụ. N'oge Pleistocene Ọ bụ mgbe nna nna mbụ nke mmadụ nke oge a pụtara. O bu otu n’ime ihe omumu banyere ihe omumu banyere ala ma buru kwa nke nwere akuku ihe omuma. Nke a na-ekwe nkwa na ozi enwetara bụ nke zuru oke ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya.
Pleistocene malitere banyere Afọ nde 2.6 na njedebe na njedebe nke afọ ikpeazụ ice mere na 10.000 BC N’oge a enwebeghị nnukwu mmegharị nke kọntinenti. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnọdụ.
Dịka anyị kwuburu na mbido isiokwu a, e gosipụtara mpaghara nkewa ụwa a niile site na ịnwe okpomọkụ dị ala n'ụwa niile. Nke a emeela ka usoro mmiri ọkụ na-arịwanye elu ma na-ebelata. A maara nke a dị ka oge mmekọrịta. Odika 30% nke elu ụwa dum ka ejiri ice kpuchie n'oge a. Ebe a na-ajụkarị oyi bụ mkpanaka ndị ahụ.
Banyere ụmụ anụmanụ, nnukwu anụmanụ ndị dị ka mammoth, mastodons na megatherium biri ndụ kacha mma. Anụmanụ ndị a fọrọ nke nta ka ha chịa ụwa ka ha buru ibu. Enwekwara mmepe nke ndị nna nna nwoke nke oge a bụ ndị Homo erectus, Homo habilis, na Homo neanderthalensis.
Geology nke Pleistocene
N'oge nkewa a, arụghị ọtụtụ ọrụ ala. Na Mgbagharị kọntinent O yiri ka ọ ga-akwụsịlata ma e jiri ya tụnyere oge gara aga. Naanị teknụzụ teknụzụ ndị kọntinent na-anabatabeghị ịkwaga ihe karịrị 100 kilomita site na ibe ha. N'oge a, kọntinent ndị ahụ dị n'ọnọdụ dị nnọọ ka nke anyị nwere taa.
Igwe glaciations bara ụba n'oge a, ember siri ọnwụ na ọtụtụ usoro nke mmụba pụtara ama nke mbenata okpomọkụ nke ụwa. Nke a mere na ọtụtụ mpaghara gafere ndịda ga-ekpuchi ice kpamkpam. N'ihi glaciations, usoro mkpo na-emetụta elu kọntinent ahụ. Nke a bụ ihe a maara dị ka glacier ịme ngosi uwe.
Ọzọkwa oke osimiri dị ntakịrị site na mkpokọta 100 mita. Nke a bụ n'ihi akpụ ice n'oge glaciations.
Igwe ihu igwe Pleistocene
N’oge a, banyere ihe a akpụrụ Age. Nke a ezighi ezi ebe ọ bụ na n'oge Pleistocene, ọtụtụ glaciations mere nke nwere oge na okpomọkụ dị elu na gburugburu ebe ndị ọzọ dị ala. Ihu igwe na ọnọdụ ihu igwe na-agbanwe n'oge niile ọ bụ ezie na okpomọkụ ha ebilighị dị ka n'oge ndị ọzọ nke ụwa geology.
Ọnọdụ ihu igwe bụ ihe na-aga n'ihu nke oge Pliocene mbụ. N'oge a, ọnọdụ okpomọkụ ụwa dara nnukwu. A hụrụ eriri ala dị n'akụkụ okporo osisi ahụ, n'oge a Antarctica ka fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpamkpam kpuchie ya na ice site na nsọtụ ugwu nke kọntinent America na Europe n'oge ọkwa glaciation.
N'ime oge Pleistocene dum, enwere glaciations 4.
Ifuru, fauna na mmadu
N'oge a, ndụ dị iche iche n'agbanyeghị oke oke ihu igwe dị adị n'ihi glaciations. N'oge Pleistocene enwere ọtụtụ ụdị nke biomes. Na ụdị biome nke ọ bụla, a malitere ahịhịa ndị nwere ike ịmegharị maka ọnọdụ kachasị njọ. N'ebe ugwu nke mbara ala n'ime Arctic Circle bụ ebe biome anyị maara taa dị ka tundra. Njirimara isi nke tundra bụ na osisi ndị ahụ pere mpe, enweghị akwụkwọ osisi ma ọ bụ nke ukwu. N'ime ụdị okike ndị a, lichens bara ụba.
The taiga bụkwa biome ọzọ nke ahụrụ n’oge Pleistocene. The taiga mejupụtara tumadi nke ahịhịa ụdị ebe ha na-adịkarị osisi coniferous na mgbe ụfọdụ iru oke elu. Dika esi eweputa ihe omuma site na ihe edere edere, enwere kwa lichen, moss na ferns na biomes.
N'ime kọntinent nke okpomọkụ ahụ adịghị obere ma ọ kwere ka nnukwu osisi tolite nke nwere ike ibu oke ohia. Ọ bụ ebe a ka thermophilic osisi malitere ịpụta. Osisi ndị a bụ ndị nwere mmegharị ndị dị mkpa iji lanarị oke okpomọkụ.
N'ihe banyere umu anumanu, anumanu bu ndi kachasi ike. Otu ihe pụtakarị na anụmanụ a bụ na a maara ya dị ka megafauna. Nke ahụ bụ, anụ ọhịa kachasị ukwuu bụ nnukwu ma nwee ike iguzogide obere okpomọkụ dị n'oge ahụ.
Tụkwasị na nke a, ìgwè anụmanụ ndị ọzọ nọgidere na-eme ka ọdịiche dị iche iche na evolushọn na-eme mgbanwe iji kwekọọ na gburugburu ọhụụ. Anuanom mmarima ne mmea binom nso wɔ hɔ a, wɔn ani gye paa. Nnukwu mammoth bụ anụ na-atọ ụtọ n'oge a. Mpụta ma ọ bụ ha yiri enyí ndị anyị maara taa. Ha nwere ogologo nku ogologo ha na njirimara kachasị ha bụ curvature na-eme ka ha gbagoo. Dabere na mpaghara ebe a ga-achọta ha na ọnọdụ okpomọkụ ya ejiri aji ma ọ bụ obere mkpuchi kpuchie ya ma ha nwere omume nri ahịhịa.
Ma ụmụ mmadụ, ọtụtụ n'ime ndị nna nna umu nke Ndị ọzọ ma nke a mekwara ka ọ pụta ìhè. Ihe njiri mara ya bụ na o ruru ogo kachasị ụbụrụ ya.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Pleistocene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Pleistocene
Kedu ihe bụ hydrogeology na gịnị ka ọ na-amụ
Kedu ihe bụ oke osimiri na ihe ọ na-amụ